Fandefasana fitaovam-piadiana amerikana miafina amin'ireo vondrona mpampihorohoro? Mandà an'i Silk Way Airlines any Azerbaijan
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fandefasana fitaovam-piadiana amerikana miafina amin'ireo vondrona mpampihorohoro? Mandà an'i Silk Way Airlines any Azerbaijan
Silk Way Airlines avy any Azerbaijan dia nanao sidina miafina 350 hitaterana fitaovam-piadiana an-jatony taonina avy any Bulgaria mankany amin'ireo mpampihorohoro ISIS any Syria sy ireo firenena Afovoany Atsinanana hafa eo anelanelan'ny 2014 sy 2017.
Ny filazam-baovao dia nataon'ny mpanao tatitra momba ny Tetikasa momba ny heloka bevava sy kolikoly (OCCRP) tamin'ny alàlan'ny fametrahana fangatahana Freedom of Information Act (FOIA) tamin'ny governemanta amerikana tamin'ny 2016.
Silk Way Airlines dia kaompaniam-pitaterana entana tsy miankina Azerbaijan miaraka amin'ny foibeny sy ny sidina miasa ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Heydar Aliyev any Baku, Azerbaijan. Izy io dia miasa mampifandray ireo serivisy mpitatitra entana Eoropa ary Asia, Etazonia ary Africa, ary koa serivisy ho an'ny governemanta sy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
Tamin'ny taon-dasa, Harut Sassounian nanoratra lahatsoratra ho an'ny Asbarez News nitatitra fa ny Silk Way Airlines avy any Azerbaijan dia nanao sidina miafina 350 hitaterana fitaovam-piadiana an-jatony taonina avy any Bulgaria mankany amin'ireo mpampihorohoro ISIS any Syria sy ireo firenena Afovoany Atsinanana hafa eo anelanelan'ny 2014 sy 2017.
Ny fanambaràna dia nataon'ny mpanao gazety momba ny Tetikasa momba ny heloka bevava sy kolikoly (OCCRP) tamin'ny alàlan'ny fametrahana fangatahana Freedom of Information Act (FOIA) tamin'ny governemanta amerikana tamin'ny 2016. Tsara homarihina fa Silk Way, “fananan'ny orinasa iray taloha ny fifandraisana amin'ny fianakavian'i Azerbaijan Aliyev, dia nahazo fifanarahana ahazoam-bola marobe avy amin'ny tafika amerikana, ”hoy ny antontan-taratasy FOIA.
Manana fanambarana mahagaga vaovao isika izao fa nahazo fampindramam-bola mitentina 419.5 tapitrisa dolara avy amin'ny US Export-Import Bank (EXIM) i Silk Way mba hividianana fiaramanidina mpitatitra entana 747-8 telo avy any Boeing hanohizana ny asa ratsy ataony.
Ny Silk Way Airlines ("Silk Way") dia manohitra mafy ireo fanambarana diso farany napetraka tao amin'ny lahatsoratra an-tserasera marobe nanandramana hanaratsy laza malaza Silk Way. Tsy misy ilana azy na inona na inona tombony azo, ireo lahatsoratra ireo dia vokatry ny fampielezan-kevitra voarindra momba ny fampahalalana diso nosoratan'ireo mpanoratra manetsika geopolitika natao ho fiaraha-miasa mivantana amin'ireo fifandraisana Armenianina.
Mifanohitra amin'ny fanambarana diso natao tamin'ny lahatsoratra, ny Silk Way dia nanaraka tamim-panajana ireo fomba fiasa sy fomba fiasa rehetra napetraka araka ny lalàna mifehy ny fiaramanidina nasionaly sy iraisam-pirenena ary ny lalàna mifehy ny fitaterana entana amin'ny alàlan'ny rivotra, ao anatin'izany ny International Air Transport Association (IATA) sy ny International Civil Aviation Organization ( Fenitra ICAO). Amin'ny maha fomba fiasa mahazatra azy, alohan'ny hanaovana ny sidina resahina, ny Silk Way dia nahazo foana, tsy misy fiarovana ara-diplaomatika, ny fahazoan-dàlana sy ny fanavotana ilaina rehetra hitaterana entana mampidi-doza.
Ho fanampin'izay, antsoina hoe 'sidina miafina', navoaka tao amin'ireo lahatsoratra voaresaka, ankoatry ny habetsany fictitious, dia niasa tamin'ny fanajana tanteraka ny fomba rehetra napetraka ary ny departemanta amerikana misahana ny fiarovana (DoD) no nandidy azy, raha ny consigneur sy ny consignee rehetra kosa notendren'ny fahefana voalaza. Amin'izay, ny fanambarana manontany ny toetoetran'ireto sidina ireto sy ireo mpandefa azy ary ny entana dia tsy misy singa ara-dalàna na lehibe rehetra.
Mifanohitra amin'izany no izy, ny fikirakiran'ny Silk Way an'ity entana ity dia nohamafisin'ny manampahefana maro, izay avy eo dia nanda ny fanambarana diso momba ny fitondran-tena ratsy tamin'ny fanambarana ofisialy, ny iray amin'izy ireo dia natao teto.
Ireo mpanoratra mitovy ihany izay manandrana mamaritra ny Silk Way ho orinasa voarohirohy amin'ny hetsika tsy ara-dalàna, dia niaiky tao amin'ny lahatsoratr'izy ireo fa andrim-panjakana ambony toy ny tafika amerikana ao anatin'izany ny US Transport Command, Boeing ary Boeing Global Services, ny Departemantan'ny Fiarovam-pirenena any Canada. ny tafika alemana, ny tafika frantsay ary ny Firenena Mikambana, dia manana fifandraisana fifanarahana hatry ny ela amin'ny Silk Way. Ireo fiaraha-miasa ireo dia manamafy ny lazan'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka anay ary manaporofo ny fanoloran-tenan'i Silk Way amin'ny serivisy kalitao, fiarovana, fahamendrehana ary fanajana orinasa.
Tsy nahomby tamin'ny fanaporofoana ny filazany ny sidina tsy ara-dalàna, ny fanentanana diso dia nanao herisetra tamina filoham-pirenena Silk Way Group, Andriamatoa Zaur Akhundov ary nametra-panontaniana ny amin'ny famatsiam-bola ny fanitarana ny sambo Silk Way. Ireo lahatsoratra dia namorona vaovao momba ny mari-pahaizana sy traikefa matihanina an'Andriamatoa Akhundov, nanandrana ny hampiseho azy ho 'lehilahy misitery' tsy fantatra izay nifehy ny marika Silk Way. Raha ny marina, na izany aza, Andriamatoa Akhundov dia nanakiana ny fananganana Silk Way, mpitarika ny ekipa Silk Way hatramin'ny voalohany, ary nitondra traikefa sarobidy nandritra ny am-polony maro tamin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny sidina ao Azerbaijan. Andriamatoa Akhundov dia tsy manana fifandraisana amin'ny governemanta na antoko politika.
Mikasika ireo fiampangana mifandraika amin'ny famatsiam-bola amin'ny fanitarana ny sambo Silk Way, dia niasa mangarahara ny zotram-piaramanidina anay ary vokatr'izany dia nanangana fiaraha-miasa azo antoka amin'ny andrim-panjakana famatsiam-bola iraisam-pirenena fanta-daza, ao anatin'izany ny Banky Export-Import (Ex-Im) an'ny Etazonia. Ny Ex-Im Bank dia maso ivoho federaly miaraka amin'ny politika voalohany manohana ny fahazoana ireo vokatra vita amerikanina toa ny fiaramanidina Boeing. Talohan'ny nahazoan'ny Silk Way ara-dalàna ny fampindramam-bola tamin'ny tahan'ny tsena nisy izay notohanan'ny Banky Ex-Im dia nandalo tamin'ny fomba mahomby ny zotram-pitantanana rehetra, anisan'izany ny fandinihan'ny governemanta amerikana.
Ankoatr'izay, ny antoka fa ny Silk Way azo avy amin'ny Banky Iraisam-pirenen'i Azerbaijan (IBAR), dia notakian'ny Banky Ex-Im ho fiarovana fanampiny ary natolotra ny zotram-piaramanidina antsika mifototra amin'ny fepetra sy fepetra mahazatra eo amin'ny tsena, ny naotin'ny zotram-piaramanidina, ary tsy misy tombontsoa rehetra amin'ny Silk Way. Ho fanampin'ny fizotran'ny fanatanterahana an-tsokosoko ataon'ny mpanamory fiaramanidina, Silk Way dia mitazona protokol 'Fantaro ny mpanjifanao' miambina ary manaraka tsara ny fomba fanao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsara indrindra, manara-maso ny mpanjifa ho avy mety hahita loza mety hitranga na asa tsy ara-dalàna. Ny tantaran'ny Silk Way momba ny fanarahan-dalàna ataon'ny orinasa dia tsy vitan'ny nampihena ny risika, fa koa nanamafy sy nanamafy ny fifandraisan'ny orinasa erak'izao tontolo izao. Izay fampahalalana mifanohitra amin'izany, ao anatin'izany ny habetsaky ny indram-bolan'ny Silk Way, dia diso amin'ny sokajy rehetra.
Ekipa atokisan'ny Silk Way, fiaraha-miasa matanjaka eran'izao tontolo izao ary etika, asa azo antoka no hanohizany am-pireharehana ny serivisy tsara indrindra natolotry ny indostrian'ny entana an-habakabaka amin'ireo toerana 50 mahery eran'izao tontolo izao izay iasanay.
Inona ny fanentanana fanosorana sy lahatsoratra Silk Way Airlines miresaka ny?
Navoaka tamin'ny 4 septambra ity lahatsoratra ity ary manazava hoe:
"Nomena fifanarahana mitentina 400 tapitrisa dolara mahery miaraka amin'ny Command Command an'ny Departemantan'ny Fiarovana amerikana nandritra ny folo taona mahery i Silk Way," hoy i Devansh Mehta avy ao amin'ny OCCRP. Silk Way dia nitondra "bala sy fitaovana tsy mahafaty" hafa tany Afghanistan hatramin'ny taona 2005. "Ankoatry ny fifandraisany amin'ny governemanta amerikana, ny Silk Way Airlines dia niasa ihany koa ho toy ny mpanafika an'ny Departemantan'ny Fiarovana Nasionaly Kanadiana, ny tafika mitam-piadiana Alemanina , ary ny tafika frantsay, ”hoy i Mehta nanambara.
Tamin'ny volana aprily 2017, nampitombo ny fividianana avy any Boeing ny Silk Way, nanao sonia fifanarahana $ 1 miliara ho an'ny fiaramanidina mpandeha 10 MAX vaovao, araka ny filazan'ny mpanao gazety Mehta. Na izany aza, tsy fantatra ny fomba nanomezana famatsiam-bola vaovao. Tamin'ny volana oktobra lasa teo, nanambara drafitra hividianana fiaramanidina mpitatitra entana 737-747 roa hafa i Silk Way.
Nambaran'i Mehta fa "ny sidina dia an'ny Silk Way Group, izay, fara fahakeliny, indray mandeha, dia nifandray akaiky tamin'ny fianakavian'i Aliyev mpitondra fanjakana Azerbaijan (izay nampiasa ny fiaramanidina ho an'ny dia manokana) ary nahazo tombony tamin'ny fifanarahana ara-panjakana feno hatsaram-panahy. Ny fampahalalana azo tamin'ny alàlan'ny FOIA dia mampiseho fa ny Silk Way Airlines dia nandray fepetra hanafina ny mombamomba ny tompony, angamba hanatsarana ny fahafaha-mahazo azy ireo antoka ara-bola amerikana sarobidy sy fifanarahana ara-tafika. ”
Nanampy i Mehta fa “i Azerbaijan dia mitana ny laharana 122 amin'ny firenena 180 ao amin'ny index of perséption ny kolikoly an'ny Transparency International, raha ny fianakavian'ny filoha Ilham Aliyev kosa manana fananana lafo erak'izao tontolo izao mitentina 140 tapitrisa dolara mahery. Ny Papers Panama sy ny fivoahan'ny rano hafa dia nampifandray ny fianakavianan'ny firenena voalohany amin'ny firotsahana an-tsehatra amin'ny sehatra rehetra amin'ny toekarena Azerbaijan, manomboka amin'ny hotely mihaja ka hatramin'ny fitrandrahana ka hatramin'ny banky. ”
Raha ny fe-potoana nindramin'ny Banky Export-Import $ 419.5 tapitrisa tamin'i Silk Way, raha sanatria misy tsy mety dia averin'ny Banky Iraisam-pirenen'i Azerbaijan (IBA) an'ny fanjakana. Ny olana dia ny "IBA" voarohirohy tao amin'ny Azerbaijani Laundromat, drafitra goavambe izay nitentina $ 3 miliara ivelan'ny firenena tamin'ny alàlan'ny orinasa akorandriaka isan-karazany, "hoy i Mehta nanoratra. Ankoatr'izay, IBA dia tsy afaka miantoka ny fampindramam-bola Silk Way, satria ny IBA mihitsy no nanambara ny fatiantoka tamin'ny 2015, tsy afaka nandoa ny trosa 3.3 miliara dolara!
Nate Schenkkan, talen'ny tetik'asa Nations in Transit ao amin'ny Freedom House, fikambanana tsy miankina amerikana izay manara-maso ny demokrasia sy ny zon'olombelona erak'izao tontolo izao, dia nametra-panontaniana momba ny fahendren'ny findramam-bola EXIM Bank an'i Silk Way: “Any Azerbaijan, toerana misy fianakaviana iray manjakazaka ara-toekarena ary ara-politika ary avy eo mampiasa andrim-panjakana hamerenana ny tetik'asany ara-toekarena, misy fifanoheran-kevitra miharihary. ”
Arzu Aliyeva, Pres. Zanakavavin'i Aliyev 21 taona tamin'ny 2010, dia iray tamin'ireo tompon-trano telo an'ny Silk Way Bank, ny sampana ara-bola an'ny Silk Way Holding. Nanomboka ny taona 2017 dia tsy tononina ho tompony intsony ny anarany. "Silk Way Holding, izay antsoina koa hoe Silk Way Group (SW Group) ao amin'ny tranonkalany, dia orinasa iray izay nitanisa orinasa 11 ao amin'ny portfolio-ny, ao anatin'izany ny zotram-piaramanidina," hoy i Mehta.
Silk Way Holding no nibahan-toerana tamin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina Azerbaijan taorian'ny nanam-pandraisana an-tsokosoko ny seranam-piaramanidina AZAL tamin'ny fomba miafina tsy nisy tolotra sy tolotra. Nanoratra i Mehta fa “ny fanaovana privatisation ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia niafara tamin'ny nahazoan'ny fianakaviana [Aliyev] kolikoly $ 1 lavitrisa dolara sy sanda iraisana, hoy ny tantaran'ny OCCRP teo aloha. Ny fanadihadiana ihany koa dia nahitana fa ny vola dia natokana ho an'ny fianakaviana voalohany tamin'ny alàlan'ny orinasa miafina any ivelany. Ireo orinasa ireo dia nahafahan'ny Aliyevs nifehy ny tsatokazo amin'ny toeram-pitrandrahana volamena, ny fifandraisan-davitra ary ny asa fananganana any Azerbaijan. ”
Araka ny antontan-taratasy tamin'ny 2006, ny Silk Way Airlines dia fananan'ny IHC (International Handling Company), orinasa any ivelany izay monina ao amin'ny Nosy Virgin British. Tamin'ny filana tamin'ny 2017, nilaza ny Silk Way Airlines fa ny 40% an'ny orinasa dia fananan'ny IHC, raha 60% kosa SW SWing, izay fehezin'ny Zaur Akhundov, olom-pirenena Azerbaijanina. Nilaza i Mehta fa "ny IHC dia mifandray amin'ny fianakaviana Aliyev amin'ny alàlan'ny talen'ny Jaouad Dbila izay voalaza fa nisolo vava ny tombontsoan'ny fianakaviana voalohany teo aloha."
Tamin'ny 2011, mpitantana teraka Rosiana, Grigory Yurkov, dia nomena fahefana mpisolovava ho an'ny Silk Way Holding sy IHC, araka ny gazetim-panjakana ofisialin'i Luxembourg. Ity fanendrena ity dia nampiasaina mba hanafenana ny tena tompon'ny IHC.
Mandritra izany fotoana izany, Zaur Akhundov dia lasa tompona 100% an'ny Silk Way Group iray manontolo tamin'ny taona 2014. Tamin'izany fotoana izany, ny orinasa sy ny fananany maro dia efa mitentina amina miliara dolara, hoy i Mehta, mifototra amin'ny fangatahana antoka momba ny fampindramam-bola an'ny orinasa. Akhundov, 50 taona, dia nanana toerana ofisialy maromaro tany Azerbaijan. "Tsy mazava ny nahatongavan'i Akhundov ho tompona kaoperativa an-tapitrisany dolara miaraka amin'ny fiaramanidina maherin'ny 10, orinasa fiantohana, orinasan-trano ary orinasa mpikojakojana fiaramanidina, hanome anarana vitsivitsy ny orinasa ao amin'ny Silk Way Group," Mehta nanontany tena.
Araka ny Schenkkan of Freedom House, “Azerbaijan dia azo faritana ho toy ny piramida afovoany sy mitsangana izay misy tombony azo amin'ny fianakaviana iray izay manangona hofan-trano manerana ny toekarena. Tafiditra ao anatin'izany ny fifanakalozana isan-karazany, tsy ny raharaham-panjakana ofisialy mety misy haba sy volam-bahoaka ihany, fa ny zavatra izay misy koa ny zavatra heverintsika fa tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina: fanondranana entana, entana ho an'ny mpanjifa, fitaterana - faritra rehetra amin'ny toekarena, ny fianakaviana manana tombony amin'izany ary tapaka ny zavatra mitranga. ”
Ny kongresy amerikana dia tokony hanao famotopotorana hamotopotorana ny maha-ara-dalàna ny antoka ara-bola mitentina $ 419.5 tapitrisa an'ny EXIM Bank ho an'ny Silk Way Airlines, ny fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ireo vondrona mpampihorohoro any Moyen Orient, ary ny fananany miafina nataon'ny fianakavian Aliyev mpitondra. Fa maninona, Azerbaijan, firenena manana petrodollar an'arivony tapitrisa, no tokony homena indram-bola any Etazonia?
Voafaritra ny politikam-karama farany ambany $ 15 an'ny Disneyland Resort
Mandeha lamasinina any Frantsa amin'ny SNCF amin'ny TGV Air